Iraq-Iran War - Wikipedia
Dagaal Ciraaq- Iran Iraq iyo Iiraan
Iraq-Iran War- September 22, 1980 - Tahraan
dawac Iraqi T-62 tank Iran
tiroka dhul bamka 30 milyan iran iyo iraq dhulka
Wasirka Kabirka Iraanka dagaalki iraaan iyo iraak Macaduwan
Ciraaq-Ciraaq waa dagaal khilaafaad ah oo u dhexeeya Iran iyo Ciraaq, laga bilaabo 22-kii September 1980-kii, markii Ciraaq uu ku soo duulay Iran, iyo dhammaadkii 20kii Agoosto 1988-kii, markii Iran ay aqbashay xabbad joojin UN-ka ah. Ciraaq waxay doonaysay in ay bedesho Iran oo ah gobolka ugu wayn ee reer Khaliijka, waxaana ka walwalsanaa in 1979-kii Iran Revolution uu hoggaamiyeyaashii Ciraaq ee Ciraaq u horseeday kacdoonkii dawladda Ba'athaanka. Dagaalka ayaa sidoo kale la socday taariikh dheer oo ku saabsan khilaafaadka xuduudaha, Ciraaq waxay qorsheeyneysaa in ay dib u dhigto gobolka Khuzestan oo saliideed iyo bangiga Shatt al-Arab (Arvand Rud).
Inkasta oo Ciraaq ay rajeyneysay in ay ka faa'iidaysato fowdo sii kacaysa ee Iran ka dib, waxa ay samaysay horumar xadidan, isla markaana si dhakhso ah loogu soo celiyay; Iran waxay ku guulaysatay dhammaan dhulkii lumay bishii Juun 1982. Lixdii sano ee xigtay, Iran waxay ku jirtey weerarka  ilaa dhamaadkii dagaalka.  Waxaa jiray tiro ciidamo ah oo madax ah - gaar ahaan Mujaahidiinta Dadka ee Iran ee ka soo horjeeda Ciraaq iyo maleeshiyooyinka Kurdiyiinta Ciraaq ee KDP iyo PUK oo lala xiriirinayo Iran. Maraykanka, Midowga Soofiyeeti, Faransiiska, iyo dalalka Carabta ayaa taageero ka heley Ciraaq, halka Iran ay badanaaba go'doomisay. Siddeed sano ka dib, dhibaatooyinka dhaqaale, ayaa hoos u dhigay morale, guuldaradii milatari ee Iran, ciraaqiyiinta dhawaan Ciraaq, isticmaalka Ciraaq ee hubka burbur weyn iyo la'aanta caalamiyiin caalami ah, iyo kor u qaadida xiisadda milatariga Mareykanka ee Iran oo keentay xabbad joojin Qaramada Midoobay.
Dagaalka ayaa la barbardhigay Dagaalkii Dunida Iyada oo la adeegsanayo xeeladaha loo isticmaalo, oo ay ka mid yihiin dagaal-yahano ballaadhan oo wata xadhkaha wabiga ah oo lagu farsameeyey xarumo difaaceed oo xoog leh, qoryaha maraakiibta, rasaastada, weerarrada bini'aadamnimada ee Iran, isticmaalka hubka kiimikada ee Ciraaq , iyo, ka dib, weerarro qarsoodi ah oo lala beegsado bartilmaameedyada rayidka. Qiyaastii 500,000 oo askari oo ciraaqi ah iyo Iiraan ayaa ku dhintay, iyada oo tiro intaas le'eg ah dadka rayidka ah. Dhamaadka dagaalku wuxuu sababay isbeddel la'aan ama isbeddelada xuduudda.
Waddnamha dinac[wax ka badal | wax ka badal xogta]
United Kingdom iran|Iraq
Liska Dagaalka Aasiya
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Iraq-Iran_War&oldid=228051"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 6 Jannaayo 2022, marka ee eheed 17:39.